Cunto fudud Kukiyada M&M (Soft & Chewy) - Sugar Geek Show - Kukiyada
Cunto fudud oo M&M Cookie ah
Kukiyadaan M&M waxay karsadaan jilicsan oo calaliya waxayna ku habboon yihiin munaasabad kasta
Kukiyada M&M waa buskud fudud oo fudud oo loogu talagalay Ciidaha. Beddela midabada (mahadsanid M & M's waxay ku yimaadaan midabbo badan) adiguna waxaad heshay naftaada daaweyn xafladeysan oo aad u fudud waqti yar. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa hal koob oo caano ah ama baaquli jalaato ah si noloshaadu u dhammaystirto. Raac tilmaamahayga boostada blogka si aad u hesho buskud qafiif ah iyo xanjo leh oo aan faafin. Qabow looma baahna!
M & M’s waa mid kamid ah nacnaca ugu caansan USA. Waa dhaqan Mareykan ah. M & M’s waxaa la abuuray 1940-yadii, waxaa qoray Forrest Mars, Sr. Markii ay ahayd 1950-meeyadii, M & M's waxay ahaayeen kuwo duurjoog caan ah oo adkeeyay booskooda taariikhda nacnaca. Joogtada ah ee M & M ayaa sameeya cunto fudud laakiin sidoo kale dhadhamiya cajiib dubista macmacaan!
Waxyaabaha ay ka kooban tahay buskudka M&M ee xoqan
Sameynta buskudka M&M ee xoqida ah runtii waa wax fudud. Waan ballan qaaday. Waa wax walba oo ku saabsan maaddooyinka inay yihiin heer-kulka saxda ah si loo helo kuwa ku habboon ee loo yaqaan 'cookies' iyo 'cookies'. Haddii aad rabto inaad wax badan ka barato waxa ka dhigaya buskudka cufan, calalinta ama keega, waa inaad iska hubisaa kuweyga cookie 101 dhaji .
karinta buskudka sonkorta leh ee aan faafin
Sonkorta dahaaran - Waxay ku siisaa macaan iyo geesaha jilicsan cookies-kaaga. Waxa kale oo muhiim u ah kareemka subagga si ay u abuurto hawada cajiinka buskudka.
Sonkorta buniga ah - Sidoo kale waxay siisaa macaan buskudka M&M laakiin moolalka ku jira sonkorta buniga ah ayaa waliba buskudka ka dhigaya mid fiican oo jilicsan, xitaa ka dib maalmo kaydinta ka dib.
Subagga aan cusbada lahayn - Isticmaalidda subagga aan cusbada lahayn waa muhiim si aysan buskudyadaadu u dhadhamin cusbo. Hubso in subaggaagu yahay heerkulka qolka (jilicsan oo ka tagi kara fartaada laakiin wali wuxuu hayaa qaabkiisa) si ay si fiican ugu kareemato sonkorta. Aad u adag, ama aad u dhalaalay oo ma heli doontid wiish sax ah oo ku jira buskudkaaga.
Ukunta - Wax walba isku hay. Hubso inay yihiin heerkulka qolka si ay si tartiib ah ugu jilciyaan subaggaaga. Ukunta qabow waxay u dhigantaa buskud badan oo faafa iyo fidsan. Waxaan u adeegsaneynaa beedka beedka dheeriga ah qaabkan loogu talagalay qoyaanka iyo cuncunka.
Cusbo - Cusbada qaar waa muhiim. Waxay soo saartaa dhadhanka cuntadaada adigoon dhadhamin cusbada.
Bur - Kaliya qadarka saxda ah ee wax walba isku haaya si buskudku u faafin laakiin aan u badnayn inay dhadhamiyaan qalalan.
Budada dubista - Waxay siisaa cookies-keena kor u qaadista wanaagsan, iyaga oo ka dhigaya kuwo aad u jilicsan
Fixiso - Sidoo kale wuxuu ku darayaa wiishka iyo sidoo kale dhadhanka
Vanilii - Waxay siisaa buskudka dhadhan fiican. La'aantood, waxay dhadhamin lahaayeen wax aad u xun.
M & Ms - Xiddigga buskudka M&M! U beddel midabada wax alla wixii munaasabaddaadu ku baaqdo. Had iyo jeer waxaan u qoondeeyaa qiyaastii 1/4 koob oo ah M & M’s si aan ugu isticmaalo dusha buskudkayga ka dib markaan xoqdo.
Sida loo sameeyo buskudka M&M ee xoq
Sameynta cajiinka buskudka ee M&M ma fududaan karin. Kaliya isku kari kareemkaaga subagga, sonkorta, iyo milixda ilaa ay ka iftiimayaan oo qalafsanaanayaan. Kudar ukuntaada oo lagu daray ukunta ukunta iskuna qas ilaa inta ay siman tahay. Kadib ku dar bur, budada dubista, soodhaha, iyo M & Ms. Isku qas ilaa inta ay isku dhafan tahay.
Qaado cajiinkaaga # 20 qaaddo buskud ah (qiyaastii 2 miisaska loo yaqaan) oo ku rid xaashida cookie-ka ee buskudka ku qoran.
Marwalba waxaan kudarsadaa xoogaa M & Ms dheeri ah dusha sare si aad runtii u aragto midabka kadib markii cajiinka uu faafo. Qiyaastii shan M & Ms halkii cookie.
Ku kari buskudkaaga 5 daqiiqo at 350ºF ka dibna rog digsiga si aad u dhiirrigeliso xitaa dubista. Dub ilaa 6-7 daqiiqo oo kale ama illaa bartanka buskudku ka sii dhalaalayo. Ha ka badinin iyaga dubi! Way sii adkaan doonaan markay qaboobaan. Haddii aad dubatid waqti dheer, way adkaan doonaan oo way xoqmi doonaan.
sida loo barafoobo keeg sida xirfadle ah
Markay buskudyada 'M&M' ka soo baxayaan foornada, waxay noqon doonaan kuwo aad u buurbuuran laakiin way degi doonaan markay qaboobaan.
Waxaad sidoo kale qaboojin kartaa kubadaha cajiinka cookie si aad u karisid wakhti kasta oo aad rabto cookie diiran. Looma baahna in la dhalaaliyo. Kaliya ku dar dhowr daqiiqo waqtiga dubista.
Ku keydi buskudka M&M ee la dubay weel buskud ah, bacda ziplock ama weel kasta oo hawo qaboojiyaha ah heerkulka qolka illaa laba toddobaad.
Cunto kariyeyaal badan oo cookie ah si loo tijaabiyo
Kukiyada Shukulaatada Cunnada jilicsan & Chewy
Kukiyadaan M&M waa kuwo jilicsan oo calaacal leh geesaha jilicsan! Ka buuxaan tan oo nacnac M&M ah oo aan qabow lahayn! Waxaan jeclaan jirnay sameynta cookies-kaan M&M ee Easter-ka laakiin maxaa yeelay M & M's waxay ku yimaadaan midabbo aad u tiro badan waxaad si fudud u badali kartaa midabada oo aad uga dhigi kartaa munaasabad kasta oo gaar ah. Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:10 daqiiqado Kalori:2447kcal
▢9 ounces (227 g) bur dhan ujeedo leh 2 koob oo la jarjaray oo lala simay
▢4 ounces (113 g) subag aan cusbo lahayn 1/2 koob, heerkulka qolka
▢4 ounces (113 g) sonkorta granulated 1/2 koob
▢laba ounces (57 g) sonkorta buniga ah 1/4 koob
▢1 weyn (1 weyn) ukunta heerkulka qolka
▢10 ounces (284 g) Nacnaca M&M 2 koob
▢Istaag mashiinka ku lifaaqan galka
Kuleyli foornadaada ilaa 350ºF oo ku xardho laba xaashi oo buskud ah iyo warqad soo duub ah.
Ku kareem subagga jilicsan, sonkorta cad iyo sonkorta buniga ah weelka dhajiskaaga istaaga oo ku lifaaqan daboolka suufka ilaa ilays iyo qalafsanaan. Qiyaastii 2 daqiiqo.
Ku dar ukuntaada, ukunta ukunta iyo vanilj iyo kareemka hooseeya illaa inta la isku darayo. Weelka xoq weelka si aad u hubiso in wax waliba si siman leysugu daro.
Ku dar burka, budada dubista, soodhaha iyo milixda oo isku walaaq hoose illaa inta la isku darayo.
Ku duub cajiinka xaashidaada cookie adoo isticmaalaya # 20 qaaddo (qiyaastii laba qaado qaado qaado kasta) oo kor u dhig xoogaa M & M ah si aad u aragto midabada markay dubanayaan.
Dub ilaa 10-12 daqiiqo ama ilaa bartanka buskudku ka sii dhalaalayn. Kukiyada waxay noqon doonaan kuwo cirro leh.
U oggolow cookies-kaaga inuu ku qaboojiyo digsiga 5 daqiiqo ka hor intaadan u gudbin silig si uu u qaboojiyo inta harsan. Ku keydi heerkulka qolka weel ciriiri ah illaa laba toddobaad.
U isticmaal subagga heerkulka qolka natiijooyinka ugu fiican
Isticmaal ukunta heerkulka qolka. Waxaan ukumeydayda dhigaa (qolofka) baaquli biyo diiran 5 daqiiqo. Ukunta heerkulka qolka waxay sameeyaan buskud adag.
Kareem subaggaaga iyo sonkortaada 1-2 daqiiqo illaa midab khafiif ah leh ka hor intaadan ku darin ukunta
U adeegida:1buskud|Kalori:2447kcal(122%)|Kaarboohaydraytyada:346g(115%)|Protein:33g(66%)|Dufan:103g(158%)|Dufan Dufan:62g(310%)|Kalastarol:614mg(205%)|Sodium:748mg(31%)|Kaliumperyamper:892mg(25%)|Fiber:6g(24%)|Sonkor:170g(189%)|Vitamin A:3349IU(67%)|Kaalshiyam:375mg(38%)|Bir:13mg(72%)
sida loo sameeyo kareemka la kariyey ee ugu dambeeya
sidee shukulaatada ugu xanaaqdaa guriga
gaabinta saamiga sare halka laga iibsado
sida loo sameeyo nacnac nacnac gummy
karinta for keega strawberry ka xoq